Wonyaa gyidifo pii wɔ Ikoniom, na nkurɔfo tan wɔn ani wɔ hɔ (1-7)
Nkurɔfo a wɔwɔ Listra no buu wɔn sɛ wɔyɛ anyame (8-18)
Wosiw Paul abo, nanso wanwu (19, 20)
Wɔhyɛɛ asafo ahorow no den (21-23)
Wɔsan kɔɔ Antiokia a ɛwɔ Siria (24-28)
14 Bere a woduu Ikoniom no, wɔkɔɔ Yudafo hyiadan mu, na sɛnea wɔkasae no maa Yudafo ne Greecefo dɔm kɛse bi bɛyɛɛ gyidifo. 2 Nanso Yudafo a wɔannye anni no tutu guu amanaman mufo no asom, na wɔsɛee wɔn adwene ma wonyaa anuanom no ho adwemmɔne.+ 3 Enti wɔtenaa hɔ kyɛe, na wɔde Yehowa* tumi kasae akokoduru so. Na Onyankopɔn ma wɔyɛɛ sɛnkyerɛnne ne anwonwade, na ɔnam so dii asɛm a ɛfa n’adom ho no ho adanse.+ 4 Nanso, nnipadɔm a wɔwɔ kurom hɔ no mu kyɛɛ abien. Ebi kɔɔ Yudafo no afã, ɛnna ebinom nso kɔɔ asomafo no afã. 5 Bere a amanaman mufo ne Yudafo ne wɔn sodifo no yɛe sɛ wɔrebedwoodwoo wɔn na wɔasiw wɔn abo no,+ 6 wɔtee ho asɛm. Enti woguan kɔɔ Likaonia nkurow Listra ne Derbe ne nkuraa a atwa ho ahyia no mu.+ 7 Bere a woduu hɔ no, wɔkɔɔ so kaa asɛmpa no. 8 Ná ɔbarima bi wɔ Listra. Ná ɔyɛ ɔbafan a ɔte fam. Bere a wɔwoo no no, na ɔyɛ obubuafo, na na ɔnnantewee da. 9 Bere a Paul rekasa no, na saa ɔbarima yi retie no. Na Paul hwɛɛ no dinn, na ohui sɛ ɔwɔ gyidi a ebetumi ama wanya ayaresa.+ 10 Enti ɔde nne kɛse kae sɛ: “Sɔre gyina wo nan so.” Ɛnna ɔbarima no huruw gyinaa hɔ, na ofii ase nantewee.+ 11 Bere a nnipadɔm no huu nea Paul ayɛ no, wɔmaa wɔn nne so kaa no Likaonia kasa mu sɛ: “Anyame ayɛ wɔn ho sɛ nnipa asian aba yɛn nkyɛn!”+ 12 Na wofii ase frɛɛ Barnaba Seus, na Paul de, wɔfrɛɛ no Hermes, efisɛ ɔno na na odi anim kasa. 13 Ná Seus asɔredan wɔ kurotia, na ne sɔfo no de anantwi ne nhwiren abotiri* baa kurow no apon ano, na na ɔpɛ sɛ ɔne nnipadɔm no bɔ afɔre. 14 Nanso, bere a ɔsomafo Barnaba ne ɔsomafo Paul tee no, obiara suan n’ataade mu, na wɔde mmirika kɔɔ nnipadɔm no mu, na wɔteɛteɛɛm sɛ: 15 “Mmarima, adɛn nti na moreyɛ eyinom? Yɛn nso, yɛyɛ nnipa a yɛwɔ mmerɛwyɛ te sɛ mo ara.+ Na yɛreka asɛmpa no akyerɛ mo, sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛtwe mo ho afi nneɛma hunu yi ho na moaba Onyankopɔn teasefo no nkyɛn. Ɔno na ɔyɛɛ ɔsoro ne asaase ne ɛpo ne nea ɛwɔ mu nyinaa.+ 16 Awo ntoatoaso a atwam no mu no, ɔmaa amanaman no nyinaa kwan ma wɔyɛɛ nea wɔpɛ.+ 17 Nanso ɔkɔɔ so dii ne ho adanse,*+ efisɛ ɔyɛɛ nneɛma papa. Ɛne sɛ, ɔmaa osu tɔ fii soro maa mo, ɔmaa mo mmere a aduan ba,+ ɔmaa mo aduan di mee, na ɔde anigye hyɛɛ mo koma ma.”+ 18 Nanso ɛno mpo, wɔka brɛe ansa na nnipadɔm no regyae afɔre a na wɔpɛ sɛ wɔbɔ ma wɔn no. 19 Ɛnna Yudafo bi fi Antiokia ne Ikoniom bae bɛsɛee nnipadɔm no adwene.+ Na wosiw Paul abo twee no kɔɔ kurow no akyi, efisɛ na ɛyɛ wɔn sɛ wawu.+ 20 Nanso, bere a asuafo no betwaa ne ho hyiae no, ɔsɔree, na ɔkɔɔ kurow no mu. Ade kyee no, ɔne Barnaba fii hɔ kɔɔ Derbe.+ 21 Na bere a wɔkaa asɛmpa no kyerɛɛ kurom hɔfo wiei a wonyaa asuafo dodow bi no, wɔsan kɔɔ Listra ne Ikoniom ne Antiokia. 22 Wɔhyɛɛ asuafo no den*+ wɔ hɔ, na wɔhyɛɛ wɔn nkuran sɛ wɔntena gyidi no mu. Na wɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛsɛ sɛ yɛfa amanehunu bebree mu de kɔ Onyankopɔn Ahenni mu.”+ 23 Bio nso, wɔpaw mpanyimfo maa wɔn wɔ asafo biara mu,+ na wɔbɔɔ mpae yɛɛ akɔnkyen,*+ na wɔde wɔn hyɛɛ Yehowa* a wɔabegye no adi no nsa. 24 Afei wɔkɔfaa Pisidia baa Pamfilia,+ 25 na bere a wɔkaa asɛm no wɔ Perga wiei no, wosian kɔɔ Atalia. 26 Bere a wofii hɔ no, wɔde po so hyɛn kɔɔ Antiokia. Ɛhɔ na bere bi wɔde wɔn hyɛɛ Onyankopɔn nsa sɛ ɔmfa n’adom mmoa wɔn mma wɔnyɛ adwuma a na wɔde rebɛhyɛ wɔn nsa no. Seesei de, na wɔawie saa adwuma no.+ 27 Bere a wɔbae no, wɔfrɛɛ asafo no nyinaa boaa ano. Na wɔkaa nneɛma pii a Onyankopɔn nam wɔn so ayɛ ne sɛnea wabue ɔpon a ɛkɔ gyidi mu ama amanaman no kyerɛɛ wɔn.+ 28 Enti wɔtenaa asuafo no nkyɛn kyɛe.
^ Anaa “nhwiren a wɔakyekyere.”
^ Anaa “wannyae ne ho adansedi.”
^ Anaa “Wɔhyɛɛ asuafo no akra den.”